Edge Finder ကို, စက်မှု Edge Finder ကို, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ဆန့်ကျင်သံလိုက် Edge Finder ကိုကမ်းလှမ်းရန်
Home > ထုတ်ကုန်များ > edge Finder ကို
edge Finder ကို ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, edge Finder ကို, စက်မှု Edge Finder ကို ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဆန့်ကျင်သံလိုက် Edge Finder ကို R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မား PM10 အ-A / B သံမဏိစက် Edge Finder
PM10 အ-တစ်ဦးကစက် Edge Finder
အသံ & မီးခွက်ကိုကိုင် edge Finder
CNC စက် Tools များဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ် Edge Finder ကို
အလွိုင်းသံမဏိအီလက်ထရောနစ် Optical စက်မှု Edge Finder ကို
အသံ & ဆီမီးခွက်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ် 20 Edge Finder ကို
အသံ & မီးခွက်ကိုကိုင်အီလက်ထရောနစ် Edge Finder ကို
အရည်အသွေးမြင့်မား PM10 အ-A / B သံမဏိစက် Edge Finder ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်အလုပ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောတည်နေရာ 1. Mechanica ဌအစွန်း Finder ။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထံမှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် 2. 3. အာရုံစူးစိုက်မှု...
PM10 အ-တစ်ဦးကစက် Edge Finder ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်အလုပ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောတည်နေရာ 1. Mechanica ဌအစွန်း Finder ။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထံမှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် 2. 3. အာရုံစူးစိုက်မှု...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD9/ Piece/Pieces
အသံ & မီးခွက်ကိုကိုင် edge Finder 1.High အရည်အသွေးအလွိုင်းသံမဏိ 2.Concentricity 0.01m ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့် Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် ER25 Collet, BT40 Collet Chuck, ဒါပေါ်မှာ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, နှိပ် collets, keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
CNC စက် Tools များဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ် Edge Finder ကို CNC စက် Edge Finder ကို 1,100% အရည်အသွေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က။ 2. တိကျပြတ်သားမှု 0.005MM 3. လျှင်မြန်စွာအလုပ်အနားနေရာချထား 4. စုံစမ်းစစ်ဆေးခိုင်မာ & Precision မြေပြင် တိုင်းတာစဉ်လှည့်ရန်လိုအပ်သော 5.Not 6. ချက်ချင်းအလင်းအိမ် LED...
အလွိုင်းသံမဏိအီလက်ထရောနစ် Optical စက်မှု Edge Finder ကို ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်အလုပ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောတည်နေရာ 1. Mechanica ဌအစွန်း Finder ။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိထံမှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် 2. 3. အာရုံစူးစိုက်မှု...
အသံ & ဆီမီးခွက်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ် 20 Edge Finder ကို 1.Touch အမှတ်ပေးဖျောပွ LED 2.High အရည်အသွေးအလွိုင်းသံမဏိ 3.Concentricity 0.01m ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်, ထို Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် သုညဆိုသည်အကြောင်း, ER Collet, BT40 Collet Chuck, CNC...
အသံ & မီးခွက်ကိုကိုင်အီလက်ထရောနစ် Edge Finder ကို 1.High အရည်အသွေးအလွိုင်းသံမဏိ 2.Concentricity 0.01m ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့် Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် ER25 Collet, BT40 Collet Chuck, ဒါပေါ်မှာ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, နှိပ် collets, keyless...
တရုတ်နိုင်ငံ edge Finder ကို ပေးသွင်း
ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်အလုပ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောတည်နေရာစက်မှုအစွန်း Finder ။
ပလပ်စတစ် box ထဲမှာထုပ်ပိုး။ Pallet ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ရရှိနိုင်ပါသည်
ကျနော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြနှုန်းအဖြစ်ပင်လယ်, လေသို့မဟုတ်ဆက်သား (DHL, TNT, FedEx) ကကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့နိုင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ feedbacks ဆည်းပူးခဲ့ကြ
စက်မှု Edge Finder ကို
ဆန့်ကျင်သံလိုက် Edge Finder ကို
အီလက်ထရောနစ် Edge Finder ကို
edge Finder ကို ES20